Dowladda oo qarisey macluumad la xiriira fadeexadii hubka ee Sacuudiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dowladda oo qarisey macluumad la xiriira fadeexadii hubka ee Sacuudiga
Dawladda oo mugdi gelisay qoraal
La cusbooneeyay onsdag 21 november 2012 kl 13.15
La daabacay onsdag 21 november 2012 kl 09.56
Dokument xaasaasi ah oo ka hadlaya wadashaqeynta hubka ee dhaxmartay Sacuudi Carabiya iyo Iswedhen ayaa laga saaray xasuus qorka xaafiiska xukumada, taas oo ka soo horjeeda qaynuunka dalka. Dokument ayaa muujinaya in xukumada ka warqabtay qorshaha ay FOI warshad hub ugu dhiseysay boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Laanta warka ee Ekot ayaa gugii la soo dhaafay maqashay warar sheegaya in ay jirto; warqad meyle ah oo laga diray xarunta FOI loona diray wasaarada difaaca taariiqdu marka ay ahayd januari 2010, warqadaas oo ay ku qornayd macluumaad xasaasi ah.
Warqadaan meylka ah oo ay aheyd in loo diiwaan geliyo sida dokument dadweyne ayaa waxaa diray Lars Höstbeck oo madax ka ah waax kamid ah FOI (laanta taqasuuska gaashaandhiga) warqadaas oo uusan gabi ahaanteed maantey xasuusneyn.
- Warqad macluumaadkaa ku qoran yahay maan u diray Per Andersson? Warqadaas ma' ahan wax aan xasuusto, ayuu yeri Lars Höstbeck.
Warqadaan meylka ah ayaa waxaa loo diray Per Andersson oo asagu ka howl-gala wasaaarada gaashaandhiga, laakiin asagu waa diidey arintaas in uu kala hadlo Ekot. Laakiin Ekot ayaa ka dalbatey xarunta maamulka xukumada in warqadaas la siiyo balse waxaa la siiyey fartiin ah in aysan jirin warqadaas.
Bilowgii dayrtaan, dhowre bilood kabacdii ayaa loo soo direy Ekot warqadaas oo ah warqad xasaasi ku ah dowladda. Warqadaan meylka aha waxay muujineysa in FOI ay ku wargelisay dowladda warshada hubka ay u dhiseysay Sacuudi Carabiya.